काठमाडौं महानगर ताजा अपडेटः ६१२२६ मत गन्दा कांग्रेस र एमाले उम्मेदवार बिच कडा प्रतिस्पर्दा ! - jagritikhabar.com
काठमाडौं महानगर ताजा अपडेटः ६१२२६ मत गन्दा कांग्रेस र एमाले उम्मेदवार बिच कडा प्रतिस्पर्दा !
काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ। पछिल्लो मतपरिणामअनुसार बालेन शाहले दोस्रो स्थानमा रहेका केशव स्थापितसँग झण्डै ११ हजार मतको अग्रता कायम गरेका छन्।
एमालेका स्थापितभन्दा बालेन १० हजार ८ सय ५१ मतले अगाडि रहेका छन्। शाहले २३ हजार १९५ मत ल्याउँदा स्थापितले १२ हजार ३४४ मत पाएका छन्।यता तेस्रो स्थानमा रहेकी कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ११ हजार ४४२ मत ल्याएकी छिन्। त्यस्तै हलोले २ हजार ३७१ मत ल्याएको छ।
उपमेयरतर्फ भने एमाले उम्मेदवारको मतान्तर निकै बढी छ। सूर्यले २३ हजार १७ मत ल्याइसक्दा लौरोले २ हजार ४४८, कलमले ७३७३, हलोले ५१६८ मत ल्याएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंहले मत बाँडिएकोमा ‘अचम्म’ लागेको बताएकी छिन्। मतगणनास्थल राष्ट्रियसभा पुगेकी सिंहले संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो पक्षमा आएको एक भोटको पनि सम्मान गर्ने बताइन्।
‘के कारणले मत बाँडियो भन्नेमा हामीलाई पनि अचम्मै लागिरहेको छ। हामी हेर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘अझ बाँकी भएको कारणले
राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वसनीय छौं।’अहिलेसम्म आएको परिणामलाई सहज रुपमा लिएको भन्दै मेयरमा जित्नेमा आशावादी रहेको उनले बताइन्।
‘मैले परिणामलाई सहज रुपमै लिएको छु। म एक भोटको पनि सम्मान गर्छु’ सिंहले भनिन्,‘सबै गणना भइसकेपछि मात्र बोल्छौं। अहिले नै बोल्दा अलिक हतार हुन्छ होला। सकिएको वडामा यो भन्दा राम्रो आउनपर्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ।’
वडा र मेयरमा के कारणले मत बाँडियो तर भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्,‘के कारणले मत बाँडियो भन्नेमा
हामीलाई पनि अचम्मै लागिरहेको छ। हामी हेर्दैछौं। अझ बाँकी भएको कारणले राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वसनीय छौं। जित्ने आशा अझै छ।’
अहिले नै मत किन आएर भनेर बोल्दा हतार हुने उनले बताइन्। ‘वडामा जित्दा मेयरमा किन मत आएन भनेर अहिले नै बोल्दा अलिक हतार हुन्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो डिफरेन्स होला भन्ने सोचिएको चैं थिएन। धेरै मतगणना गर्न बाँकी भएकाले म धेरै आशावादी छु।’
‘धेरै वडामा हामीले लिड गरिरहेका छौँ । एक लाख ९० हजार मतमध्ये ६० हजार मात्र गणना भएको छ । त्यसैले मतपरिणामबारे अहिले नै बोल्नु हतार हुन्छ’, सञ्चारकर्मीसँग सिर्जनाले भनिन् । उनले परिणामबारे मतगणना सम्पन्न भएपछि छलफल गरेर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताइ